Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Martinique » Nandeha hidin-trano i Martinique, nilaza tamin'ny mpizahatany mba hiala
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Cruising • Vaovao farany Brezila • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao farany Martinique • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny Prefecture of Martinique dia nanolo-kevitra ny tsy hanohizan'ny mpizahatany marefo sy tsy vita volo ny fijanonany.
Nisy ny fepetra vaovao noraisin'ny Prefektioran'i Martinique tamin'ny Alatsinainy 9 Aogositra.
Martinique dia nanambara ny fanidiana fanamafisana nanomboka ny talata 10 aogositra tamin'ny 7:00 hariva.
Ny tompon'andraikitra misahana ny fizahan-tany Martinique dia namaritra fa tsy voahaja intsony ny fepetra momba ny fidiovana ho an'ny fijanonana amin'ny toe-javatra mety indrindra.
Nisy fepetra vaovao noraisin'ny Prefektioran'i Martinique tamin'ny Alatsinainy 9 Aogositra, nananganana fanidiana mihamafy ao Martinique mandritra ny 3 herinandro, manomboka ny talata 10 aogositra amin'ny 7:00 hariva.
Raha jerena ny toe-javatra, ny Prefektioran'i Martinique dia nanolo-kevitra ny tsy hanohizan'ny mpizahatany marefo sy tsy vita volo.
The Fahefana misahana ny fizahan-tany Martinique dia nanondro fa ny fepetra ara-pidiovana dia tsy voahaja intsony amin'ny fijanonana amin'ny toe-piainana tsara indrindra.
Na izany aza, ny trano fandraisam-bahiny dia tsy hakatona amin'ny fomba fitantanan-draharaha mandritra io fe-potoana fanidiana io. Tokony hanana fotoana ny mpitsidika raha te handinika izay hatao izy ireo, raha manaraka ny fepetra vaovao momba ny fahadiovana manankery. Ny manampahefana misahana ny fizahan-tany Martinique dia navondrona hamaly ny fangatahan'ny mpitsidika vaovao ary hanome fanampiana ho an'ny fialan'izy ireo amin'ny nosy.
Ireo trano fandraisam-bahiny sy sehatra fanofana fialan-tsasatra dia manome fe-potoana fampihenan-tena tsy misy vidiny ary fanafoanana mifanaraka amin'ity krizy ity. Ankoatr'izay, ireo kaompaniam-pitaterana lehibe efatra manompo Martinique Amin'izao fotoana izao (Air France, Air Caraïbes, Corsair ary Air Belzika) dia nanitsy ny drafitry ny sidina hanampiana ireo mpanao fialantsasatra frantsay sy belza handamina ny fiaingany ao anatin'ny andro ho avy. Air Caraïbes dia hanolotra dia mandroso telo isaky ny mandeha eo anelanelan'ny Fort-de-France sy Paris.
Amin'ny lafiny Air France, sidina telo isan'andro no hampiasaina amin'ny 11 sy 12 aogositra avy any Fort-de-France, avy eo sidina roa isan'andro manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 Aogositra. fahaiza-manao (hatramin'ny 160 ny mpandeha fanampiny). Ho fanampin'izay, ny mpandeha rehetra izay voalahatra tamin'ny 22 aogositra ary maniry hiverina any Frantsa alohan'ny 15 Aogositra, dia afaka mamerina ny fiaingenan'izy ireo tsy misy vidiny fanampiny.
Momba ny dia any Etazonia mankany sy avy Martinique, American Airlines dia tokony hanohy ny sidina tsy miato avy any Miami mankany Fort-de-France amin'ny voalohan'ny volana Novambra amin'ity taona ity.
Dea Malli hoy:
14 Aogositra 2021 amin'ny 06:59
Martinique dia nanao safidy tsara teto, satria mampanantena ity aretina pesta ity fa lava be raha tsy hoe voatery atao mandoa haingana ny vaksiny.
Covid-19 dia hanohy hamokatra fiovana vaovao (Delta sy Lambda izao) raha tsy hoe afaka mampihena be ny isan'ireo aretina isika. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala akory hoe mandra-pahoviana ny areti-mifindra vokatry ny pesta bubonic sy ny sisa no niaritra. Nandringana ny ankamaroan'ny mponina tao izy ireo tamin'ny andro nahavitany azy ireo, saingy nanohy namono olona na taiza na taiza nahitany izany nandritra ny 200 taona ary indraindray bebe kokoa.
Ataovy azo antoka ny fiarovana an'i Martinique. Nosy mahafinaritra izy!